Guddoomiyaha Guurtida oo ka Hadlay Doorka Golahooda iyo Xukuumaddu Ka Qaadanayaan Xallinta Colaadda Koonfurta Gobolka Sool
Hargeysa(Dawan):- Guddoomiyaha golaha guurtidda Somaliland Saleebaan Maxamuud Aadan (Saleebaan Nuur) ayaa baaq nabadeed u diray labada beelood ee walaalaha ah ee dirirtu ku dhexmartay deegaanka Dhumey ee koonfurta gobolka Sool.
Waxaanu intaa ku daray in loo gurmanayo oo la dhex joogi doono isla markaana loo talin doono haddii ay talada iyo nabada qaadan waayaan oo ay isu tudhi waayaan.
Guddoomiye Saleebaan Maxamuud Aadan, waxa uu waxgaradka labada beelood u soo jeediyay in ay ALLE ka cabsadaan oo ay nafahooda iyo kuwa dadkoodaba ay cadaab ka badbaadiyaan.
Mudane Saleebaan waxa uu sidaasi ka sheegay fadhigii shalay ee golaha guurida Somaliland, waxaana uu intaa raaciyay in golaha guurtida iyo xukuumadduba ay gudan doonaan waajibaadka ka saaran soo afjaridda colaaddaas.
“Labada beelood ee colaaddu ku dhexmartay koonfurta gobolka Sool waxaanu ka codsaneynaa inay nabadgeliyadda qaataan, oo ay heshiiyaan, waana la dhex joogi, hadday iyagu isu tudhi waayaan qaranka ha ka xishoodaan, ALLENA waxaan uga baryeynaa in uu nabada wanaageeda tuso, inta maanta ku kala dhimatay illaa barigii ay dagaalada bilaabeen boqol ayay kor u dhaafeen. Markaa qaranka kama go’aan iyaguna naar u adeege qarankana intaasi kama godo, waxaanu ka codsaneynaa labadaasi reer inay ina maqlaan oo iyagu is dhawraan oo dhawraan raga.”
Guddoomiyaha Saleebaan waxaa uu sheegay in guurtidda iyo xukuumadduba doorkooda ka qaataan xallinta colaadda dhimashada badan keentay ee koonfurta gobolka Sool waxaanu yidhi “Qarankuna intaasi oo ruux kama maarmo iyagana ALLE ha garansiiyo dawladd ahaan iyo guurti ahaanba waxaynu yeeleyno ayaa inoo taala, waagii hore qolo ayaa inna diiday aqbalimeyno maalin walba, bari, Sanaag wali colaadii waa ay taagan tahay tan ayuunbaa ta weyna keenta waxaanu ka codsaneynaa inay joojiyaan colaadda oo ay is ilaashadaan isma waayayaan way isku googo’an yihiin sida qoladanba isugu googo’an tahay markaa waxaan leeyahay joojiya colaada”